राई उपर किटानी बयान | Hamro Patro
बिहानको १० : २०
राई उपर किटानी बयान
इन्दिरा प्रसाई - Jun 06 2018
हाम्रा सामु सदावहार मुस्कान पस्किने राईसरका मौन ओठहरू समेतको अन्ततः २०७५ साल जेठ १३ गते पशुपति आर्यघाटको चितामा मैले पनि अन्तिम दर्शन गरेँ ।
यो संसारमा मानिसै मानिस छन् । जताततै मानिसको भीड देखिन्छ । तर आफूलाई मनभित्रैबाट माया गर्ने, भलो चिताउने मानिस पाउन भने पूर्वजन्मको तपस्याकै फल चाहिने रहेछ । यसै परिप्रेक्ष्यमा राई सर अर्थात् गणेशबहादुर राई मेरा हितैषी र मलाई धुमधामै माया गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो भन्न पाउँदा म आत्मगौरवी हुने गर्छु ।
मैले राई सरलाई जति पटक भेटेँ त्यति पटक नै उहाँको सुमधुर मुस्कान सजिएको उज्ज्वल मुहार मेरा सामु हुन्थ्यो ।
अङ्ग्रेजी भाषा र नेपाली भाषामा बराबरी दखल भएका राई सरका कृति उहाँका सुक्ष्म परिचायक मात्र हुन् । मलाई लाग्छ, ती कृतिका महत्ता आफ्नै ठाउँमा छ तर ती कृतिभित्र खामिएको विद्वता वा संवेदनाभन्दा पनि अधिक विद्वता र संवेदनशीलता राईसरमा छताछुल्ल पाइन्थ्यो ।
नेपाली धरालाई धुमधामै माया गर्ने र शिक्षाको क्षेत्रलाई सम्मानित गर्ने व्यक्तिको नाउँ पनि गणेशबहादुर राई नै हो ।
हाम्रो देशका लागि नमूना व्यक्ति पनि हो राई सर !
जातजाति, भाषाभाषी अथवा लिङ्गभेदमा विश्वास नगर्ने व्यक्तिको नाउँ पनि हो गणेशबहादुर राई ।
अनि मानवतावाद र राष्ट्रवादका ज्वलन्त उदाहरण हो राई सर !
आज भन्दा पचहत्तर वर्षअघि आफ्नो युवा अवस्थाको सम्पूर्ण उर्जा नेपालको पूर्वी पहाड ताप्लेजुङमा खर्चिनु चानचुने कुरा थिएन । विकास र निर्माणको त्यस कालरात्रिका बेला ताप्लेजुङ जिल्लाको दुर्गम गाउँ हाङपाङमा राई सरले शिक्षाको ज्योति बाल्ने अठोट गर्नु नै ठूलो कुरा थियो । तर उहाँले त अठोटलाई कार्यमै परिणत गरेर आठराई नै झल्मल्याउनु भयो ।
राई सर हाङपाङ पुगेपछि त्यहाँ साहित्य, कला र सङ्गीत पनि झाङ्गिएको रहेछ । उहाँकै कारण थपिएर टाढाटाढाबाट पनि हाङपाङमा पढ्न विद्यार्थी आउन थालेका रहेछन् । वास्तवमा त्यसबेला रात दुई गुना र दिन चार गुना हाङपाङ प्रसिद्धिको शिखरमा आरोहण गर्न थालेको रहेछ ।
हाङपाङको मुहार तेजश्वी पार्ने राई सरलाई हाङपाङले पुरस्कार दिनु पर्ने थियो । हाङपाङले उहाँलाई उहाँले बोक्नै नसक्ने फूलको माला लगाई दिनु पर्ने थियो । अनि हाङपाङले उहाँको ऋणको भारी आफ्नो थाप्लोमा राख्नु पर्ने थियो ।
तर हाङपाङका केही जनले राई सरलाई अपमान गरे, रूवाए र अनेक झेल, झाल र षड्यन्त्र गरेर हाङपाङ छाड्न बाध्य गराए ।
आफ्नो उर्जावान २० वर्ष खामेर मन, वचन र कर्म रोप्ने राई सरलाई उहाँको अति प्यारो हाङपाङ छोड्न वाध्य बनाइएपछि उहाँ अमिलो थुक निल्दै पत्नी र लालाबाला बोकेर रातोरात ताप्लेजुङको डाँडामा पुग्नुभयो ।
राई सरको माया हाङपाङमा नै थियो तर उहाँ फर्केर त्यहाँ जाने अवस्था पनि रहेन । उहाँले जहाँ आफ्नो जीवन रोप्नु भएको थियो त्यहीं नै उहाँको जरा धोइपखाली गरियो । तर पनि उहाँले भनिरहनु भयो- "मेरो हाङपाङ नै पृथ्वीको स्वर्ग थियो । मेरो भौतिक चोला जहाँ भए पनि मेरो मन त्यही हाङपाङमा नै जरा गाडेर बसेको छ ।"
त्यस बेला राई सरको शैक्षिक ज्योतिले उज्जिलिनेहरू अहिले नेपाल भित्रमात्रै होइन संसारभरि नै उच्च ओहदाधारी, सम्पन्न र सुललित भएर छरिएका पाइन्छन् ।
भारतको रमणीय देहरादुन शहरमा अध्ययन गरेका राई सरले आफूलाई दुर्गमको कष्ठसाध्य जीवनमा होमेर आठराईलाई धपक्क बाल्नु भएको थियो ।
यस्ता महामना राई सर मेरा अर्धाङ्ग नरेन्द्रराज प्रसाईका अति प्रिय र आदर्श गुरू बाबु भएकै कारण जोडिनाले नै म पनि राईसरको ओजका छिटाहरू पाउन सफल भएकी हुँ । अर्को कुरा मैले जीवनमा धेरै शिक्षक पनि देखेँ, शिष्य पनि देखेँ । म आफैँ शिक्षक भएकाले मेरा पनि शिष्य भए तर राई सर र नरेन्द्रबीचको जस्तो पितापुत्रतुल्य भूतो न भविष्यति सम्बन्ध भने मैले देख्न वा अनुभूत गर्न पनि पाएकी छैन ।
मेरा प्रातः स्मरणीय जैविक पिताको नाउँ गणेश हुनु र राई सरको अग्रनाउँ पनि गणेश नै हुँदाको तालमेलले पनि मलाई राई सरसँग केही थप आकर्षण भए झैँ पनि लाग्छ मलाई ।
नश्वर देह विसर्जन भइसकेका गणेश सरलाई यस बेला म आफूभित्र खोज्ने क्रममा छु । यस प्रक्रियामा मलाई गणेशबहादुर राईसरको "जिन्दगीदेखि जिन्दगीसम्म" कवितासङ्ग्रहको लोकार्पणको सन्दर्भ सम्झनामा आइरहेछ ।
"मेरो कार्यक्रम इन्दिरा नानीले नै चलाउनु पर्छ है !" नइ गृहमा राई सरले किताप मेरा हातमा थमाउँदै भन्नु भएको थियो । त्यस बेला मैले रमाउँदै गर्वको अनुभूति प्रकट गरेकी थिएँ ।
हामीसँगको भेटघाटपछि राई सर उहाँका एकजना पुराना अनन्य मित्रलाई पनि समारोहको निम्तो दिन उनका घरमा पुग्नु भएछ । ती मित्रले कार्यक्रमको नालिबेली सोधेपछि राईसरले पनि सबै बेहोरा जानकारी गराउनु भएछ । राई सरका ती हितैषी मित्रले मेरो नाउँ कार्यक्रमबाट नहटाए उक्त समारोहमा उपस्थित हुन नसक्ने अड्डी लिनु भएछ ।
"इन्दिरा प्रसाईबाटै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मेरो दृढ निश्चय हो, समारोहमा उपस्थित हुने नहुने मित्रको विचार ह‍ो" भनेर राईसर त्यहाँबाट विदा हुनु भएछ ।
कृति लोकार्पण कार्यक्रम सकिएपछि राई सर र उहाँकी पत्नी (विद्या भाउजू) बाट हामीले यस घटनाबारे पूर्ण जानकारी पाएका थियौँ ।
"ओहो ! मेरा लागि राई सरले आफ्नो त्यति पुरानो मित्रताको पनि वास्ता गर्नु भएनछ ।"
म राई सरप्रति थप अनुगृहित हुने मेरा लागि त्यो विशेष घटना थियो ।
फेरि पछि राई सरको अङ्ग्रेजी पुस्तकको लोकार्पण कार्यक्रम सञ्चालनको अभिभारा पनि उहाँले मलाई नै दिनु भएको थियो ।
तर सो कार्यक्रमकै दिन अति जरूरी कामले गर्दा अचानक म विराटनगर जानु परेकाले त्यस बेला मैले मेरी बहिनी नमिता सिंह अर्थात् हाल Maa Priyambada Nath Shrimali लाई सो कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मा लगाएकी थिएँ ।
विरामी परेर नथलिउञ्जेल विद्या भाउजुका साथमा राई सर हामीले आयोजना गर्ने कार्यक्रम र नइ गृहमा समेत बराबर आउने गर्नु हुन्थ्यो । हामी नइ पनि उहाँका हरेक डेराहरूमा पुगेर सर र विद्या भाउजूका आत्मीय आतिथ्यमा रमाउँदै विद्या भाउजूका पौरख समेत झोलाभरि बोकेर घर फर्किन्थ्यौँ ।
हामी काठमाडौँमा हुँदा हरेक दसैँमा राई सर र विद्या भाउजूका हात हाम्रा निधारमा पुगेकै हुन्थे ।
राई सरको निजी घर भएपछि हामी नइ हाम्रो अनुकूलतामा भक्तपुरस्थित राईगृह पुग्ने गर्थ्यौँ । दिनदिनै जसो राईसरको हालत खराब अझ खराब हुँदै गएको देख्थ्यौँ । तर जति नै अशक्त अवस्था हुँदा पनि मैले उहाँको अनुहारको ओजमा कहिल्यै कमी देखिन ।
मैले जहिले पनि एक तपस्वीका रूपमै राई सरलाई देख्दै आएकी थिएँ । त्यस घडी पनि उहाँ देहत्यागको घोर तपस्यामा लीन भएर निर्वाण प्राप्त ऋषिकै स्वरूपमा मैले उहाँलाई महसुस गरेँ ।
संसारमा हरेक दिन हरेक पल मानिसहरूको मृत्यु त भइरहेकै हुन्छ । जन्मपछि मृत्यु सामान्य घटना पनि हो । हाम्रो मोहमायाका कारण मात्र मृत्युको घटनालाई विशेष बनाएर हामी बढी पिरोलिन्छौँ । खासमा आफ्नो शिरमा हात राखिदिने, आफूलाई विशेष माया गर्ने अभिभावकको कमी हुँदा मनभित्रै एकतमासको रिक्तताबोध भने हुने रहेछ । राई सरको निर्वाणपछि मैले त्यस्तै अनुभूत गरेँ ।
राई सरको स्मृतिको सेरोफेरोमा विद्या भाउजूलाई छुटाउने हो भने मेरो भावनाले पूर्णता पाउने छैन ।
विद्या भाउजुलाई राई सरका लागि अर्धाङ्गिनी थोरै र धेरै मातृत्वधारिणी नै मान्नु पर्ने हुन्छ । राई सरका हरेक सङ्घर्षमा उज्यालो अनुहारले साथ दिने विद्या भाउजू राई सरको जीवनकी उर्जादात्री हुनुहुन्थ्यो ।
राई सरको जीवनलाई धेरजसो तुवाँलोले नै ढाके पनि त्यस भित्र विद्या भाउजूको उज्ज्यालो आकाश राई सरका लागि हरहमेशा तयार रहन्थ्यो ।
चार जैविक सन्तान अशोक, आलोक, अमोध र एलिजाका पिता गणेशबहादुर राईका विद्यार्थी रूपी मानस सन्तान हज्जारौँका सङ्ख्यामा छरिएर रहेका छन् ।
आफ्ना कृति लगायत मानस र जैविक सन्तानभित्र सदा मुस्कुराउने राई सर युगयुगसम्म अमर हुने किटानी बयान दिन मलाई मन लागेको छ ।
लेखक ‘नइ प्रकाशनʼ तथा ‘त्रिमूर्ति निकेतनʼका अध्यक्ष इन्दिरा प्रसाई कथाकार, कवि तथा साहित्यका विभिन्न विधामा क्रियाशील हुनुहुन्छ ।